ရန်ကုန်မြို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယခင်က မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း၏ မြို့တော်လည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ မှ စတင်၍ စစ်အစိုးရသည် နေပြည်တော်ကို မြို့တော်ဟု တရားဝင် နေရာပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း၊ လူဦးရေ ၇ သန်းကျော်ရှိသော ရန်ကုန်မြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အကြီးမားဆုံး မြို့တော်နှင့် အရေးအကြီးဆုံးသော ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အချက်အချာအဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေသည်။
ကိုဩဒိနိတ်: 16°51′N 96°11′E
အေဒီ ၆ မှ ၁၈ ရာစု
ကိုလိုနီခေတ် ရန်ကုန် (၁၈၅၂ မှ ၁၉၄၈)
လက်ရှိ ရန်ကုန် (၁၉၄၈ မှ ယခု)
အစိုးရ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံများ
အစိုးရ အထူးကု ဆေးရုံများ
Yangzhou၊ ကျန်းစူး ပြည်နယ်၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ
Census Report။ The 2014 Myanmar Population and Housing Census။ 2။ Naypyitaw: Ministry of Immigration and Population။ May 2015။ p. 31။
"Burma's new capital stages parade"၊ BBC News၊ 27 March 2006။3August 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Martin၊ Steven။ "Burma maintains bygone buildings"၊ BBC News၊ 30 March 2004။ 22 May 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Pan Hla, Nai (1968). Razadarit Ayedawbon (in Burmese) (8th printing, 2005 ed.). Yangon: Armanthit Sarpay. p. 54
"Rangoon City", Imperial Gazetteer of India, Oxford: Clarendon Press, 1908
Jedidiah Morse; Richard C. Morse (1823), "Rangoon", A New Universal Gazetteer (4th ed.), New Haven: S. Converse
Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A. (2007). "Updated world map of the Köppen–Geiger climate classification". Hydrol. Earth Syst. Sci. 11: 1633–1644. doi:10.5194/hess-11-1633-2007. ISSN 1027-5606.
World Weather Information Service – Yangon။ World Meteorological Organization။ 8 May 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Burma (Myanmar) - Rangun (in Spanish)။ Centro de Investigaciones Fitosociológicas။ February 23, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Myanmar - Rangoon (in Danish)။ Climate Data for Selected Stations (1931-1960)။ Danish Meteorological Institute။ April 27, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 23, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Yangon။ Asian Network of Major Cities 21။ 20 June 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 August 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။2October 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ေဒၚခင္ၾကည္ေဆး႐ုံ၌ ကေလးေမြးဖြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းလူနာ ၄၀ အထိ လက္ခံကုသမည္ – Eleven Media Group